သံလွင်: မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မန်ယူအသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဒ်ဖလား.
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မန်ယူအသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဒ်ဖလား.
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ပရိသတ်များကို လှည့်လည် ပြသရာမှာ မတ်လ ၄ ရက်နေ့ ယနေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒီကိုးဦးဆောင်ပြီး သယ်ယူလာခဲ့တဲ့ ဒီအကြိမ် (၂၀)မြောက် ဖလားကို ရွှေတိဂုံမှာ ပြသခဲ့ပြီး မြန်မာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဖန်များ အများအပြား တက်ရောက်ခဲ့တယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများကိုတော့ Ots AgLay ဆီကနေ တောင်းယူ ဖေါ်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 3/05/2014 08:26:00 AM